वि.सं. २०७७ भाद्र ३० गते मङ्गलवारको राशिफल
On: २०७७ भाद्र ३० गते, मंगलवार, ०५:०० बजे प्रकाशित
प्रदोषव्रत, त्रयोदशीश्राद्ध, मघाश्राद्ध. २०ः४१ बजेपछि भद्रा।
यस हप्ता जन्म दिन पर्ने सबै दर्शक तथा पाठक महानुभावहरुलाई रामसर मिडिया युट्युब च्यानल एवं नेपाली पत्रिका डट्कमको तर्फबाट उत्तरोत्तर प्रगति, सुस्वास्थ्य एवं दीर्घजीवनको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
मेषः गर्न खोजिएका कार्यमा साविकभन्दा बढी मेहनत गर्नुपर्ला। मध्याह्नबाट गोचरग्रहमा सुधार आउने छ। रपनि बढी बोली बाठो हुनखोज्दा आफ्नै गोपनीयता खुस्कनसक्ने छ, विचार पुर्याउनु बुद्धिमानी हुनेछ।
वृषः कामकार्यमा केही अवरोधको सम्भावना छ। गरेको काममा पनि केही अपयश मिल्ने छ। स्वास्थ्यमा पनि केही मन्दि आउनसक्ने छ। अप्रत्यासित रुपमा लाभ एवं उपलब्धि मिल्नेछ।
मिथुनः कुटुम्बिक सम्बन्धमा ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ। मध्याह्नपछि शारीरिक क्षमताको विकास हुनेछ। स्वास्थ्यले पनि साथ दिनेछ। जोशजाँगर बढ्ने छ। इष्ट कार्यलाई अगाडि बढाउन सकिने छ।
कर्कटः दिनको पूर्वार्धमा राहत तथा शान्ति र सन्तोषको महसूस हुनेछ। मध्याह्नतिरबाट अपेक्षा गरे अनुसार नभए पनि आंशिक उपलब्धि हुनजाने छ। बोली व्यवहारमा भने ख्याल पुर्याउनु पर्ला।
सिंहः अप्रत्यासित रुपमा लाभ एवं उपलब्धि पनि हातपर्ने छ। मन प्रसन्न हुने वातावरण सृजना हुनेछ। कामकार्यमा सहज अनुभूति हुनेछ। स्वजनसँग संपर्क बढ्ने छ। शुभसमाचार मिल्ने छ।
कन्याः दिनको पूर्वार्ध ज्ञानकारक समय रहेको छ। मध्याह्नतिरबाट भने केही सावधानी अप्नाउनु पर्ने समय छ। केही प्रतिकूलता सृजना हुनसक्ने छ। स्वास्थ्यले पनि त्यति साथ नदिन सक्छ ख्याल गर्नुपर्ला।
तुलाः सामाजिक प्रभुत्व तथा व्यक्तित्त्वको विकास हुनेछ। मध्याह्नपछि भने जमर्को ठूलै हुने तर उपलब्धि थोरैले चित्तबुझाउन पर्ने देखिएको छ। रपनि केहीहद्सम्म न्यायिक विजय मिल्ने छ।
वृश्चिकः मानसिक र शारीरिक रुपमा सुख, शान्ति अभिवृद्धि हुनेछ। मध्याह्नपछि मानसान र ईज्जत पदप्रतिष्ठा बढ्ने छ। ठूलाबडा व्यक्तिहरुसँग सम्बन्ध जोडिने र व्यवसायिक लाभ मिल्ने छ।
धनुः केही अपयश तथा कान्तिमा ह्रासको बाबजुत स्वास्थ्यलगायतका स्थितिमा सुधार आउने देखिएको छ। प्रयत्न मुताबिक कामकार्यमा उन्नति र लाभ पनि मिल्ने छ। धर्म र भाग्यको वृद्धि हुनेछ।
मकरः विपरित लिङ्गीको सहयोगमा विशेष काममा सफलता मिल्ने छ। मध्याह्न पछि भने स्वास्थ्यले साथ नदिनसक्ने देखिएको छ। खानपान र यात्रादिमा ख्याल पुर्याउन र संयमीत हुन जरुरी देखिन्छ।
कुम्भः व्यापार व्यवसाय तथा पेशाको क्षेत्रमा लक्ष्मी प्रसन्न हुनेछिन्। मध्याह्नबाट केही आक्रोश तथा शंकाआशंकाको बाबजुत दाम्पत्य एवं प्रेम सम्बन्धमा केही सुधार आउने छ।
मीनः अर्काको चियोचर्चोमा भुल्दा आफ्नो इष्टकार्य अधुरो रहनसक्ने कुरामा ख्याल गर्नुपर्ला। मध्याह्नबाट पेशा एवं व्यवसाय तथा कामकार्यमा उन्नति प्रगति हुनेछ। शारीरिक शक्ति बढेर आउने छ।
२०७७ भाद्र ३० गते, मंगलवार, ०५:०० बजे प्रकाशित